'घामको वर्षा' मा कवि कृष्ण प्रसाई,(कुमारी लामा)
घामको वर्षा अर्थात् जीवनको वर्षा अथवा जीवनका विविध पक्षलाई उजागर पार्ने दर्शनको वर्षा । यस्तै जीवनका हरेक पक्षलाई आफ्ना गहन भावनाद्वारा एकमुष्ट रुपमा व्यक्त गर्दै नेपाली साहित्यिक माहेालका एक परिचित कवि कृष्ण प्रसाई ुघामको बर्षाु नामक ध्यान कविता सङ्ग्रह मार्फत पुनः एकपटक उदाएका छन् । 'घाम नभएको बेला' कविता सङ्ग्रह 'अनुभूतिका छालहरु' नियात्रा सङ्ग्रह आदि कृति मार्फत आफ्नो भिन्न परिचय बनाइसकेका कवि प्रसाईको यस नौलो ध्यान कविताले उनको नविनतम शैलीको खोजी र प्रयोगधर्मीतालाई प्रमाणित गरेको छ ।
जेन कविता अथवा ध्यान कविता एउटा विल्कुलै नौलो र प्रभावशाली शैली हो भावना अभिव्यक्तिको । केही हरफहरुमा नै जीवनका गहन बिषय र दर्शनलाई समेट्न सक्नु नै ध्यान कविताको बिशेषता हो । थोरै भन्दा थोरै शब्दहरुको प्रयोग गरी मनमा उर्लिएका अथाह भावना र जीवन दर्शनलाई कैद गर्न सक्नु कवि प्रसाईको जीवन माथिको गहिरो अध्ययन र अनगिन्ती भावनाको सहि अभिव्यक्तिको उपज हो ।
उसको कफनमा गोजी थिएन ।( पृष्ठ ३)
कति सहजता र धैर्यताका साथ यी केवल तीन छोटा हरफहरुले जीवनको सिङ्गो यथार्थलाई समेटेको छ ! जीवनको सत्य नै यही हो हामी जसरी एक्लै नाङ्गै यस धर्तीमा टेक्छौं त्यसैगरी एक्लै र रित्तो हात फर्कन्छौँ । हामीलाई सास रहिन्जेलसम्म अनेकन मोहले छोप्दछ जो मानवजन्य गुण हुन् तर अन्तिम सत्य केवल एउटै छ । अन्तमा हामीसँग आफ्नो शरीर बाहेक केही जाँदैन ।
कस्तो कमजोर छ मान्छे
ऊ आफैले खिचाएको
कागजको फोटोजति पनि बाँच्न सक्दैन । (पृष्ठ ४)
जीवनको क्षणभङ्गुरता अर्को जीवन दर्शनलाई अति सजिलै यी सरल शब्दहरुद्वारा सहजताकासाथ प्रष्फुटित छन् कृष्ण प्रसाईका ध्यान कविताहरुमा । यी छोटा कविताहरुले पढिसक्दै गर्दा मन मस्तिष्कमा एक मीठो तरङ्ग पैदा गरिदिन्छन् । हामीलाई मुल्यास्स केही ज्ञान प्राप्त भए जस्तो हुन्छ । हामी आफ्नै दुःख खुसी भाग दौडमा हराइरहेको बखत यी कविताहरु जीवनका वास्तविक रङ्गहरु देखाई हामीलाई मुसङ्ग पारिदिन सफल छन् ।
उनका यी छोटा ध्यान कविताहरु केवल जीवनका गहिरा दर्शनहरु मात्र उप्काउदैनन् । यी कवताहरुमा अहिलेको बिछिप्त समाजको यथार्थ चित्रण मानवीय सम्बन्ध प्रेम प्रकृति र मानव वीचको अटुट सम्बन्ध युवा शक्ति बिदेसिनुको पीडा भ्रष्ट राजनीति आदि आदिलाई सहजै मर्मस्पर्शी ढंगले उतारेका छन् ।
राष्ट्रले भोगिरहेको युवाशक्तिको पलायनलाई कवि यसरी पोख्छन्:
उर्जाशक्ति वायुयान चढेर विदेसिएपिछ
हेर्नै नहुने रुखजस्तो भएर खुइलियो
मेरो देशको वसन्त ! (पृष्ट २)
कति मुटु चसक्क पारिदिने पीडा छ यी भावनाहरुमा । बाध्यताले घेरिएका हामी गरीव देशका नागरिक धनको लालसामा प्रत्येक दिन विदेसिदै छौँ । आफ्नो मातृभूमिको मुहार भने मुन् मुन् खुइलिदै छ बिगि्रदै छ । यो यथार्थ हो । बिज्छ तर पनि यो बाध्यता छ । कवि कृष्ण प्रसाई आफ्ना व्यक्तिगत भावनका दायराबाट बाहिर निस्किई सम्पूर्ण मानव मुटुमा उर्लने प्रेमको चाहना र हामी र प्रकृतिबीचको एक अटुट सम्बन्धलाई यसरी बुझाउँछन:
पिउने पानी छहारी र स्वच्छ हावा
हरियाली फूलहरु र जङ्गली फल
पहाडले दिएको उपहार
मानिसका लागि (पृष्ठ ३४)
हो प्रकृतिका यी उत्कृष्ट उपहारहरुले नै हाम्रो मानव जीवनलाई एउटा सही मानेमा मानव भई बाँच्ने बाटो देखाएको छ । प्रकृतिका यी सुन्दर उपहारले हामीलाई सदैव एउटा इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट भई बाँच्ने प्रेरण प्रदान गर्दछ । किन कि प्रकृतिमा एउटा निश्चित नियम दायरा र जीवन हुन्छ । हामी आफै पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैनौँ । कवि प्रसाईको मानव जीवन र प्रकृतिप्रतिको गहन चिन्तन साह्रै प्रशंसनीय छ ।
यस कविता सङ्ग्रहको शिर्षक आफैमा एक प्रतिक हो जीवनको । घाम उज्यालो हो न्यानोपन हो प्रकाश हो जीवन हो । तर घाम सधैं न्यानो र आनन्ददायी हुदैन । यो त कहिले काही ज्यादै प्रचण्ड तापले भरिपूर्ण एक डरलाग्दो र पीडादायी पनि भइदिन्छ । तर चाहे न्यानो होस् अथवा रापिलो दुवै बखतको सूर्यलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ जीवन जस्तै । त्यो तेजिलो र शक्तिशाली सूर्यलाई पनि बादलले ढाकिदिन्छ घरिघरि त हाम्रो जीवनमा आइपर्ने पीडाका बादल जस्तै ।
अनि फेरि त्यो बादलको घुम्टोलाई हटाई घामले आफ्नो उज्यालो मुहार हामीलाई देखाउन टुप्लुक्क आइपुग्छ हाम्रो समिप जीवनका असंख्य खुसीका इन्द्रेणी सरी । कवि प्रसाईको ध्यानमग्न मस्तिष्कले घामलाई एउटा मानिसको जीवनका प्रत्येक पलहरुसँगै महसुस गरेको छ । त्यसैले त उनी छाती फुकाएर भन्छन्:
उनै सूर्यलाई हेरेर
म धन्य भएँ
जसलाई मेरा पूर्खाले
हजारौं बर्षअघि पुजेका थिए । (पृष्ठ ८०)
'घामको बर्षा' जीवनको बर्षा हो अथवा जीवनका प्रत्येक पक्षलाई समेट्ने र जीवनका यथार्थलाई छर्लङ्ग्याउने भावनाहरुको बर्षा हो ।
१७ भाद्र २०६६